ဆိုင်ဂလုန်းဂီရိဒုက္ခသည်များအတွက်ကနေဒါအစိုးရဒေါ်လာ(၅)သိန်းကူညီမည်၊ | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
ဆိုင်ဂလုန်းဂီရိမုန်တိုင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေကြသည့်ဒုက္ခသည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုကနေဒါအစိုးရကကူညီမည့်အကြောင်းကိုနိုဝင်ဘာလ(၃၀) ရက်နေ.ကနိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အိုဒါကကြေညာလိုက်ပါသည်၊ အရေးပေါ်ခိုလှုံရေးနေရာချထားရေး၊ကျန်းမာရေးနှင့်သောက်ရေသန်.ရရှိရေးတို.အတွက်အဓိကထားကူညီမည်လို.ပြောပါသည်၊
Medicines Sans Frontier Canada နှင့် Save the Children Canada တို.နှစ်ဖွဲ.အားတစ်ဖွဲ.(၂)သိန်းခွဲစီခွဲပေးမည်လို.သိရှိရပါသည်၊ထိပ်ပြောင်-သိန်းစိန်းတို.၊ဂျပုကျော်ဆန်းတို.၊မြေခွေး-အောင်သောင်းတို.လက်ထဲမရောက်ပါစေနဲ.လို.တိုင်းရင်းသားအသံမှဆုတောင်းလိုက်ပါသည်။
OTTAWA, ONTARIO–(Marketwire – Nov. 30, 2010) – The Honourable Beverley J. Oda, Minister of International Cooperation, today announced Canada’s humanitarian support to help the Burmese people affected by Cyclone Giri.
“The Government of Canada is responding to humanitarian emergencies caused by Cyclone Giri in Burma. Many families are now vulnerable and without access to essential services,” said Minister Oda. “Canada’s assistance will provide emergency shelter and health services, as well as access to drinkable water.”